I-Orionid Meteor Shower, enye yezinto ezinhle kakhulu onyakeni | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Enye yezihlambi zemeteor ezinhle kakhulu eziwela minyaka yonke sesifikile, ama-Orionids. Akusona esinye sezihlambi zemvula ezinkulu "ezichichima kakhulu" esiwayo, kepha singesinye sezihle kakhulu. Ngokubheka ukuthi uBill Cooke, inhloko yeHhovisi leMeteorites le-NASA, uyakuqinisekisa, kungani ezolahlekelwa yileli thuba lokuzindla ngalo?
Ama-Orionids aqale ukubonakala kangcono ezinsukwini ezine ezedlule, kepha ubusuku be-apogee obukhulu yibo kusukela kusasa ngoMgqibelo 21 kuya ngeSonto 22. Kulo nyaka kuphinde kuqondane nokuthi iNyanga ingecala lethu, izolo ebusuku yenze iNyangayezulu yayo. Ukubonakala kwalesi senzakalo kuzoba ngcono kakhulu kunokujwayelekile, ngaphandle kokuthi awekho amafu, futhi-ke, okusigcina sikude nokungcoliswa ukukhanya. Uma kunjalo, umbukiso uzoba ngumshuwalense.
Ukubuka kafushane ngemvelaphi yama-Orionids
Ama-Orionids, aqhamuka ku-Halley's Comet. Ziyizinsalela ze-comet ezungeza iLanga njalo eminyakeni engama-76 futhi eyagcina ukudlula ngo-1986. Ziyabonakala noma nini lapho iplanethi yethu iwela endaweni lapho kutholakala khona lezi zinsalela zomsila weHalley's Comet. Ungaqala ukubona ezinye ngo-Okthoba 2, bese ziphela ngoNovemba 7. Ziyabonakala futhi kunoma yikuphi emhlabeni, ngoba zidlula kakhulu eduze nenkabazwe yasezulwini.
Izinga lama-meteorite elizobonakala lizoba cishe ama-23 ngehora, futhi bazoya ku-a isivinini esilinganisiwe samakhilomitha angama-66 ngomzuzwana. Indawo lapho ongabuka khona ubheke ngakumlaza i-Orion, i-bicharraco enkulu impela! Kungakho babizwa kanjalo, ngoba kubukeka sengathi bavela kuleyo nkanyezi. Futhi-ke, khumbula ukubheka esibhakabhakeni ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lwamagajethi, njengama-telescopes noma i-binoculars. Okubalulekile lapha ukukwazi ukumboza inkambu yokubuka ebanzi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » I-Orionid meteor shower, enye yezinto ezinhle kakhulu onyakeni